South America ziwumbe riri kuChamhembe kweNorth America uye chikamu cheziendanakuenda redunhu rinonzi America. KuMadokero kwaro kune gungwa rePacific, kuMaodzanyemba nekuMabvazuva kune gungwa reAtlantic. North America neCaribbean Sea dziri kuMaodzanyemba kwakadziva kuMadokero. Ziwumbe iri rine nyika gumi nembiri dzinozvitonga dzinosanganisira —Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, neVenezuela— kunoitawo French Guiana, inotongwa neFrance.
South America ine nharaunda yakakura 17,840,000 square kilometers (6,890,000 sq mi) nehugari hwevanhu vanosvika 371,090,000 zvichitevedza kuverengwa mugore 2005. Pakukura kwenharaunda South America ndiyo yechina ichitevedza Asia, Africa, neNorth America, uye ndiwo yechishanu pakuwanda kwevanhu ichitevera Asia, Africa, Europe, and North America.
Zita rekuti America rakapiwa nevarume vanoti Martin Waldseemüller naMatthias Ringmann, vachitora zita remurume ainzi Amerigo Vespucci anova ndiye akatanga kutaura kuvanhu vaibva kuEurope kuti nzvimbo iyi haisi India asi raitova rimwe dunhu
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=South_America&oldid=72537"
This page was last edited on 7 Kubvumbi 2020, at 09:16.